तीजमा गांसिएको आध्यात्मिक प्रसंग - मालागिरी समाचार
२८ भाद्र २०७५, बिहीबार २०:०३
Home›साहित्य›तीजमा गांसिएको आध्यात्मिक प्रसंग
तीजमा गांसिएको आध्यात्मिक प्रसंग
– राधिकादेवी आचार्य
देवि ! प्रत्यक्षजो रुपं स्ष्ट यत मयाऽघुना ।
त्वामहं स्तोतुमिच्छमि प्रसन्ना भव काटिपके ।
पूर्व पश्चिमका समुद्र्लाई नाप्ने माप दण्डजस्ता भएर विराजमान भएका हिमालयकी पुत्री पार्वतीको कथा प्रसङ्ग नै तीजको पर्वसंगै जोडिदै आएको सर्वविदित छ ।
सत्य युगमा दक्ष प्रजापतिकी छोरी सतीदेवीले प्राण त्यागे पछि, उनै सतीदेवी हिमालय र मेनकाकी छोरी पार्वतीले जन्म लिइन् भन्ने कथा पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । पार्वतीले वाल्यवस्थादेखि नै पूर्वजन्मको संस्कारद्वारा माटा र ढुङ्गाका शिवलिङ्ग, शिवमूर्ति निर्माण गरेर खेल्ने गरेको देख्दा पिता हिमालयलाई चिन्ताग्रस्त बनाउनु स्वभाविकै हो ।
हिमालयले छोरीको यो व्यवहार देख्दा यस्को भाग्य कस्तो होला भनि ज्योतिषीलाई देखाउन जाँदा, यी वालिका जगन्माता सर्वदा सुखदात्री सौभाग्यदायिनी सर्वत्तपुज्या हुने छन् । यिनका पति निरञ्जन, मिराकार, ओंकार स्वरुप परमात्मासंग वैवाहिक कार्य हुनेछ भनि अवगत गराए । यसै समयमा हिमालयका समीपमा नारद आइपुग्नुभयो । मलिन मुख भएका हिमालयले नारदको स्वागत संस्कार गरेर छोरीको सम्बन्धमा कुरा गर्नु भयो । हे नारद यो छोरीको मलाई ज्यादा चिन्ता भएको छ । यसमा हजुरलेनै केही उपाय बताइदिनु हुन्छ कि भन्दा नारद अत्यन्त हर्षित भई पार्वतीका अनेक गुणगान गरेर योग्य वस्तु योग्य पात्रमा दिनु पर्दछ भन्नुभयो । यी कुराकानी सुनेर पार्वती, जया र विजयानाम गरेका सखिसंग जंगलतिर यता छोरी घरमा नदेख्दा हिमालय र मेनका चिन्ताग्रस्त भई यत्रतत्र खोजी गर्न थाल्नुभयो । धेरै पर गुफामा सखिहरु का साथ बसेको देख्दा मातापितालाई असहय पीडा भयो भन्नु हुन्छ ।
हे छोरी यो तिमीले के ग¥यौ । सन्तान भएर सन्तोष होला भन्ने हाम्रो इच्छालाई तिमीले विपरीत गराइ दियौ । यस्तो मातापिताको वेदानाले प्रस्फुटित भएकी पार्वतीले भन्नुहुन्छ । हे मातापिता ! मैले वालककालदेखि शिवजीलाई पतिप्राप्त गरु भनि चिन्तन मनन गरि राखेकी थिए । हजुरले विष्णुलाई दिने निधो गरेपछि म घर जाँदैन यहि बसेर तपस्या गर्छु । जे जस्तो होला ।
यस प्रकारका पार्वतीका कुराले स्तब्ध भएका मातापिताले सम्झाई, बुझाई घरमा ल्याउनु भयो । केहि दिन पार्वती पुनः सखिका साथ जंगलमा जानुभयो । “आलि=सखिहरुले हरिता=हरण गरेको हुनाले (हरितालिका) नाम भएको बुझिन्छ ।
सखिहरुले आग्रह गरेको हुनाले हिमालय र मेनकाको स्वीकृति लिएर पार्वती तपस्या जहां गंगाको छहराले र पंक्षीहरुका शब्दले गुञ्जायमान भएको पर्वतको शिखरहरुमा जटा वल्कल धारण गरी वर्षा र शीत सहन गर्दै निराहार भई कयौं वर्ष व्यतीत भए । शिवजीले दर्शन दिनु भएन । तत् पश्चात पार्वती कालीको रुप धारण गरेर नारादले दिएको सांख्ययोगको तत्वद्धाए ध्यान भग्न हुनुभयो । छोरीको तपस्या देखेर हिमालयले जहाँ शिवजी ध्यानभग्न हुनुहुन्छ, उही लगेर सेविकाको रुपमा राख्न जानु भएको थियो । त्यसै समयमा (आकाशवाणी भयो) ।
छोरीलाई लिएर जानुहोस् मेरो ध्यानमा बाधा नपार्दिनुस् । प्रहना, विष्णु देवता आदिबाट शिवस्तुती आरम्भ भयो । स्वर्ग, मत्र्य पातालमा हाहाकार मच्चिन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा पार्वतीले शिवजीलाई कठोर प्रक्षद्वारा आह्वान गर्न आरम्भ गर्नुभयो । हे प्रेमा ! म प्रकृती हूँ, हजुर प्रकृतीभन्दा पर रहन खोज्दा हजुरले मात्र संसारको रचना गर्न असम्भव छ । यस्तो धेरै प्रश्नद्वारा शिवजी प्रभावित भएर दर्शन दिनुभयो । धेरै वादविवाद भई विवाह सम्पन्न भएको कथा शिव पुराणमा वर्णन गरिएको छ । भाद्र महिना शुल्क पक्ष तृतीयको दिन शिवजीले पार्वतीको आग्रहद्वारा यसै दिनलाई तीजको व्रत गर्नु अनि आज्ञा दिनुभयो भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ ।
शुद्ध, पवित्र भएर शिव पार्वतीको पुजा, आराधना गर्नु भन्ने प्रसङ्गमा गहना र साडीमा सजिएर दोहरी गीत गाएर अर्थको अनर्थ भएको देखिएको छ, समाजमा ।
हाम्रा पर्वहरुले सधैं खुसी एवं प्रशन्न रहने सन्देश दिएका छन् । पर्व मनाउने नाममा विकृती ल्याउने राम्रो हुँदैन । आफ्नो शक्ति सामथ्र्य अनुरुप नै पर्व मनाउन राम्रो हुन्छ । त्यसैमा नै ईश्वर प्रशन्न हुन्छन् । धाक र आडम्बरले ईश्वर प्राप्त हुन सक्दैनन् । (अतः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भत्या प्रयच्छति) त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यभेव समर्पयेत् । मैले भक्तिले पत्र, पुष्प, जल, फल अर्पण गर्दछु । यी सबै वस्तु हजुरका हुन् । हजुरलाई अर्पण गर्दछु । भन्ने भावना राखेर ईश्वरमा आफ्ना इच्छाहरु समर्पण गर्नु पर्छ । अस्तु
नेपाली तीज र यसको वर्तमान अवस्था